Antonio Valencia oo ku dhaw inuu ka tago Manchester United – Gool FM
Antonio Valencia oo ku dhaw inuu ka tago Manchester United
Liibaan Fantastic October 14, 2018
(Manchester) 14 Okt 2018 Kabtanka kooxda Manchester United ee Antonio Valencia ayaa la ogaaday inuu si bilaash ah uga tagi karo kooxdiisa.
Qandaraaska Antonio Valencia ee Manchester United ayaa dhacaya dhamaadka xiliciyaareed kaan, waxaana ku jira heshiiskiisa in kooxdu ay ka saxiixi karto hal sano oo dheeri ah.
Laakiin arinka kale ee xiisaha leh ayaa ah in bisha March ee 2019 uu laacibku heshiis u saxiixi karo kooxdii uu doono haddii United aysan ku darsan halka sano ee ku jira heshiiska.
Maamulka Manchester United ayaa ku qasban inay ku dadaalaan heshiis kordhinta Antonio Valencia ka hor inta aan la gaarin bisha Maarso ee sanadka cusub markaas oo laacibku uu ku biiri karo kooxdii uu doono.
Xaalada Antonio Valencia ee Man United ma ahan mid wanaagsan xiliciyaareed kaan kadib markii ay tababare Mourinho isku qabteen miisaankiisa oo kordhay iyo laacibka oo qayb ka noqday xiddigaha dalbanaya in la cayriyo tababaraha reer Portugal.
"Waxaan jeclaa inaan ka garab ciyaaro Cristiano Ronaldo" - Vinicius Junior
Hazard oo daaha ka rogay Xiddig ka tirsan Real Madrid oo ay si Joogta ah u xiriiraan...(Waa Laacib lama Filaan kugu noqon doona)